Umlando - Xuzhou Roc International Trading Co., Ltd.
Isungulwe ngo-1993 ngokutshalwa kwemali okungama-RMB 300,000, indawo ehlala inkampani ingamamitha-skwele ayizi-5 000, kanti isibalo sabasebenzi singu-32 rotary cutting veneer veneer ngumkhiqizo oyinhloko. Imali engenayo yonyaka icishe ibe yi-RMB 3,000,000
Ngo-1997, iXuzhou Home World Wood Co., Ltd. yasungulwa ngokutshalwa kwemali okungama-RMB8,000,000, ehlanganisa amamitha-skwele angama-33,000 futhi inabasebenzi abangaphezu kuka-200. Kulo nyaka, amandla wokukhiqiza kufaka phakathi i-plywood ebhekene nefilimu, i-plywood yokuhweba.
Ngonyaka ka-2008, kutshalwe i-RMB 20,000,000 ukukhulisa ifektri iye kuma-50, 000 square metres. Futhi inani labasebenzi lenyuswa laya ku-500. Ngalesi sikhathi, ngonyaka sihlinzeka ngamapayipi angama-cubic metres ayi-10, 000 kanye namapulangwe angama-30,000. Imali engenayo yonyaka inyukela ku-RMB 160,000,000
Ngokutshalwa kwemali engu-120 million yuan, kwasungulwa iqembu lomhlaba lasekhaya, elalihlanganisa amamitha-skwele ayi-133,000. Njalo ngonyaka ikhiqiza ifilimu ebhekene neplywood ebhekene nama-cubic metres ayi-250,000, ama-cubic meter angu-23,000 amapulangwe amafancy, ifilimu ebhekene namamitha ayi-cubic ayi-100,000 kanye nepulangwe elikhethekile elingu-5,000. Inani lonyaka lokukhipha lifinyelela ku-RMB 4,000,000,000.
2011 - Namuhla
Ngaphezulu kweminyaka engama-20 yentuthuko, manje iSenso inezinkampani ezingaphansi kuka-9 eziphethwe ngokuphelele nezinkampani eziphethe.
ABAXHASIWE BEQEMBU LOMHLABA WASEKHAYA
- ROC ukuhweba kwamazwe omhlaba Co., Ltd. - Export & Ngenisa ibhizinisi, i-Plywood design nokuhlola
- Zhengquan Izinkuni Co., Ltd. - Ukwakhiwa kweplywood umkhiqizi
- IZhanpeng Timber Co., Ltd. - Ukwakhiwa kweplywood umkhiqizi
- ILifeng Timber Industry Co., Ltd. - Umkhiqizi weplywood wezohwebo
- ITongshun Wood Co., Ltd. - Ukupakisha umkhiqizi weplywood
- Zengyin Izinkuni Co., Ltd. - I-LVL scaffolding plank, umkhiqizi we-LVL ugongolo
- Abalandeli Furniture Co., Ltd. - Umkhiqizi wefenisha